Warshad Gooni Gooni ah | Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha Go'doonka Go'doonka ah
Gacan-dheer oo la tuuro soo saaraha goonida qalliinka caafimaadka
Wax soo saarkayagu waa adag yihiin oo waarayaan, awood u leh inay la qabsadaan shaqo adag iyagoo weli ilaalinaya neefsashada raaxada leh iyo dabacsanaanta. Waxay ka samaysan yihiin maaddooyin isku dhafan oo miisaan culus leh si loo hubiyo caabbinta dareeraha. Loogu talagalay in lagu habeeyo ragga iyo dumarka nooc kasta leh, xirmooyinka laastikada ah iyo dhexda ayaa loogu talagalay inay bixiso raaxo iyo dabacsanaan isla waqtigaas.
Xaraashka iibka kulul ee gacmo-gacmeedka dhaadheer ee bilaa-biyoodka ah ee loo yaqaan 'PP + PE go'doon go'
Maaliyadeenna Go'doonka Go'doonka ah ayaa ka samaysan qalab wax lagu ilaaliyo oo tayo sare leh. Waxay kuxiran yihiin qaab dhismeedka waxayna si wax ku ool ah u xakameyn karaan dareerayaasha iyo walxaha. oo waxay leedahay raaxo wanaagsan, ku dheellitir dabacsanaanta dhexda dhexda leh balastarro caag Dabacsan qaabka qaabka si aad ula kulanto waxqabadyadaada kala duwan!
buluug tayo sare leh goonyaha go'doomin la tuuri karo
Badeecadani waa suud go'doomin buluug ah oo la tuuri karo oo miisaankeedu yahay 50gsm. Maadadu waa Polyester. Waxay leedahay caabbinta dareeraha wanaagsan. Badeecadu waxay leedahay xirmooyinka laastikada ah iyo qaabeynta qaabeynta dhexda, oo si wanaagsan loola qabsan karo dadka leh qaababka jirka ee kala duwan.
Xulashada dharka goonida u liita ee xulashada dharka ugu fiican
Alaabooyinkayagu waxaa loogu talagalay iyada oo la raacayo habka dhabta ah ee loo adeegsado cufnaanta badeecadaha alaabada ayaa si habsami leh loogu talagalay inay ka dhigaan kuwo aad u ammaan iyo badbaado leh